Yintoni eyahlukileyo phakathi kwee-SAT kunye neMviwo ze-ACT
Umzekeliso Ukuba i-SAT okanye UMTHETHO yi-Uviwo olufanelekileyo
Ziziphi iintlukwano phakathi kweemviwo ze-SAT kunye no-ACT? Ngaba kufuneka uthathe enye yeemvavanyo okanye zombini?
Iikholeji ezininzi zamkela izikolo ze-SAT okanye ze-ACT, ngoko unokuzibuza ukuba kufuneka uthathe i-SAT, ACT okanye zombini iimviwo. Kunokwenzeka ukuba awuyi kulufumana okanye uvavanyo olunikezelayo kwinani elikhulayo leekholeji zokuzikhethela . Kwiphepha le-flip, unokufumanisa ukuba ukuba uthatha umThetho, usadinga ukuthabatha uvavanyo lwe-SAT . Ucwaningo luka-2015 lwe-Kaplan lufumene ukuba ama-43% abafundi beekholeji bathatha ii-SAT kunye noMTHETHO.
Abafundi abaninzi bafumana inqanaba elifanayo le-percentile kwi-ACT kunye neSAT. Nangona kunjalo, iimvavanyo zivavanya ulwazi oluhlukeneyo kunye neengxaki zokuxazulula iingxaki, ngoko akuqhelekanga ukwenza okungcono kunomnye uvavanyo kunomnye. Ulwahlulo oluphambili lweemviwo luchazwe ngezantsi. Incwadi yokuHlola iPrinceton ACT okanye i-SAT? inokusetyenziswa kwakhona.
Ukuqala ngo-Matshi 5, 2016, iBhodi yeKholeji iqalise ukuhlaziywa okukhulu kokuhlolwa kwe-SAT. Ezi zinguqu ziboniswa ngokuthelekiswa ngezantsi.
I-SAT yayilungiselelwe okokuqala njengendlela yokuvavanya ukufaneleka-ihlola iimpawu zakho zokuqiqa kunye nokuthetha, kungekhona oko ufunde esikolweni. Enyanisweni, i-SAT yayifanele ibe ngumvavanyo ongenakukwazi ukufunda ukufundisisa ayitshintshi ukufaneleka. UMTHETHO, ngakolunye uhlangothi, uvavanyo lokuphumelela. Kuthelelwe ukuvavanya oko ufunde esikolweni. Nangona kunjalo, oku kwahlula phakathi "ubuchule" kunye "nokuphumelela" kuyinto engathandabuzekiyo. Kukho ubungqina obukrakra obubonisa ukuba unokufunda i-SAT, kwaye njengoko iimvavanyo ziguqukile, zize zikhangele ngakumbi kwaye zifana nomnye. Uvavanyo olutsha lwe-SAT oluqaliswe ngo-2016 luninzi lweemviwo zokuphumelela kuneenguqulelo zangaphambili ze-SAT.
UMTHETHO unemibuzo engama-215 kunye nencoko yokukhetha. I-SAT entsha inemibuzo engu-154 kunye ne-(esandula) incoko yokuzikhethela. Ixesha lokuvavanya lo Mthetho ngaphandle kwencoko yimizuzu engama-2 kunye nemizuzu engama-55 ngelixa i-SAT ithatha iiyure ezingama-3 kunye neyongezelelweyo imizuzu engama-50 ukuba ukhetha ukubhala isicatshulwa esikhethiweyo (ixesha elipheleleyo lokuvavanya ixesha elide ngenxa yezikhefu). Ngoko ke, ngelixa i-SAT ithatha ixesha elincinane, ivumela abafundi ithuba elilodwa ngombuzo ngamnye kunomthetho.
Enye yeyona ntlukwano enkulu phakathi koMthetho kunye ne-SAT kukuba umThetho unemivavanyo yesayensi equka imibuzo kwiindawo ezifana ne-biology, i-chemistry, i-physics kunye nesayensi yesayensi. Nangona kunjalo, akudingeki ukuba ube yenzululwazi ukuba wenze kakuhle kuMTHETHO. Enyanisweni, uvavanyo lwezenzululwazi luvavanya ukuba ukwazi ukufunda nokuqonda iigrafu, iingcamango zesayensi kunye nesishwankathelo sophando. Abafundi abaqhuba kakuhle ngokufunda ngokuthe rhoqo baqhuba kakuhle kwi-Testing Reasoning Test.
Ukubhala iZakhono zeZakhono
Igrama ngokubaluleka kokubili i-SAT kunye ne-ACT, ngoko abafundi abaza kuthatha imviwo bafanele bazi imithetho yesigqibo / isenzi, ukusetyenziswa kwezibhengezo ezifanelekileyo, ukuchonga ii-runs-ons njalo njalo. Nangona kunjalo, ugxininiso kwisikolo ngasinye sihlukile. UMTHETHO ugxininisa ngakumbi kwiimpawu zokubhala (funda loo mithetho ye-comma!), Kwaye iquka nemibuzo malunga nezicwangciso ze-rhetoric.
UMTHETHO unemibuzo embalwa edinga i-trigonometry. I-SAT ayikho. UMTHETHO we-ACT uyingundoqo, kodwa kufuneka ungene kwiimvavanyo ukuqonda indlela yokusebenzisa i-sine ne-cosine.
I-SAT Guessing Penalty (engekho!)
I-SAT endala yenzelwe ukwenzela ukuba ukuqaphela okungaqhelekanga kulimaza amanqaku akho jikelele. Ukuba unokuphelisa ubuncinane impendulo enye, kufuneka uqikelele, kodwa ngaphandle koko kufuneka ushiye impendulo ingenanto. Oku kuye kwatshintshile, ngo-Matshi 2016: ngoku akukho naso isohlwayo sokuqaphela iSAT. Oku kwakuyinto edidekayo yovavanyo kubafundi abaninzi; Ngoku, kulungele ukuqaphela impendulo (emva kokuphelisa zonke iimpendulo ezingalunganga) kunokushiya umbuzo ongenanto.
UMTHETHO akakakaze abe nesigwebo sokuqikelela.
Incoko yomThetho ikhethekileyo, nangona iikholeji ezininzi zifuna. Kuze kube kutshanje, inzululwazi ye-SAT yafuneka. Ngoku, kukhethwa kwakhona. Ukuba ukhetha ukubhala isicatshulwa sovavanyo, unemizuzu engama-50 ukubhala inzame ye-SAT kunye nemizuzu engama-40 ukubhala isicatshulwa se-ACT . UMTHETHO, ngaphezu kwe-SAT, ikucela ukuba uthathe ukuma kwimiba enokuphikisana nayo kwaye udibanise impikiswano yokuphikisa njengenxalenye yesincoko. Ukufumana isicatshulwa esitsha se-SAT, abafundi baya kufunda ivesi kwaye basebenzise izakhono zokufunda ngokukhawuleza ukuchaza indlela umbhali abakha ngayo ingxabano yakhe. I-essay prompt iya kuba yinto efanayo kwiimviwo zonke-kuphela ivesi iya kutshintsha.
Amacandelo okufunda okubhekiselele kwi-SAT agxininisa ngakumbi kwisigama ngokwemiqathango yesiNgesi . Ukuba unolwazi olungelulwimi kodwa unolwazi olungenamsebenzi, UMTHETHO unokube uvavanyo olungcono kuwe. Ngokungafani nabafundi abathatha i-SAT, i-ACT yokuhlola iimviwo aziyi kuphucula amanqaku abo ngokukhumbuza amagama. Nangona kunjalo, ngokutsha kwakhona kwe-SAT, abafundi baya kuvavanywa kumazwi aqhelekileyo asetyenziswa ngamazwi, kungekhona kwizinto ezinqabile kakhulu (cinga ukuba unobunzima kunokuba uthinteke ).
Abafundi abathatha i-SAT baya kufumana ukuba le mibuzo iyanzima ngakumbi njengoko iqhubeka. UMTHETHO unesimo esiqhubekayo sobunzima. Kwakhona, isigaba seMAT sesigaba sonke sinokuzikhethela ezininzi kodwa isigaba samatriki se-SAT sinemibuzo efuna iimpendulo ezibhaliweyo. Kuzo zombini iimvavanyo, isicatshulwa esikhethekileyo siphelile.
Izikali zokulinganisa iimviwo ezimbini zihluke kakhulu: icandelo ngalinye le-ACT liphuma kumaqondo angama-36, ngeli candelo ngalinye le-SAT liphuma kuma-800 amanqaku. Lo mdahluko awunandaba kakhulu kuba amanqaku anzima kangangokuthi kunzima ukufumana amanqaku afanelekileyo kwiimviwo, kwaye amanqaku aphakathi rhoqo ajikeleze ama-500 kwi-SAT kunye ne-21 yomThetho.
Omnye umehluko ophawulekayo kukuba uMTHETHO unikeza amanqaku amanqaku - ibonisa indlela izikolo zakho ezidibeneyo ezilingana ngayo nabanye abaqingqiweyo bokuvavanya. I-SAT inikezela ngamanqaku ahlukeneyo kwicandelo ngalinye. Ngokomthetho, iikholeji zihlala zibeka ubunzima obuninzi kumanqaku ahlukeneyo kunamanani amanqaku.
Iindleko zeemviwo ezimbini zifana nale ngcaciso ingezantsi ibonisa:
UMTHETHO Iindleko ngo-2017-18:
UMTHETHO WEMTHETHO: $ 46
UMTHETHO WEMISEBENZI NGOKUBHALA: Ukubhala: $ 62.50
Iingxelo zeeNgxelo ezongezelelweyo (4 zikhululekile): $ 13
Iindleko ze-SAT ngo-2017-18:
Ukuhlolwa kwe-SAT: $ 46
Ukuhlolwa kwe-SAT kunye ne-Essay: i-$ 60
Iingxelo zeeNgxelo ezongezelelweyo (4 zikhululekile): $ 12
Ukubona uluhlu olupheleleyo lweemali ze-SAT kunye neMITHETHO, la manqaku angancedisa: I- SAT Iindleko, iiNtlawulo kunye neeMigodi | UMTHETHO Iindleko, iMirhumo, kunye neeMigodi
Amathuba kunye neDisi yamanga
Ingxaki Yokukhula YeRage Rage
Iikomiti zeeNkcazo zeeNgcaciso ziHlola njani izicelo
Iifayile zeShark zezingane kunye neentsapho